RESTBET501 FENERBAHÇE'NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN - RESTBET501.COM GİRİŞ
RESTBET501 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN
December 4, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 6
အုပ်ချုပ်ရေးအပြောင်းအလဲများသည်အဝါရောင်နှင့်နက်ပြာရောင်များဖြစ်သည်။ အားကစားဒါရိုက်တာရာထူးအတွက် Emre Belözoğluကိုခန့်အပ်ခြင်းသည်ဤပြောင်းလဲမှု၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Emre Belözoğluအားအားကစားဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်တွင်သူ၏နေရာတွင်အစားထိုးဝင်ရောက်ခဲ့သည်မှာSelçukŞahinဖြစ်သည်။
SelçukŞahinသည် Emre Belözoğluနှင့်အတူလုပ်ကိုင်လိုသောနာမည်တွင်ပါသည်။ Fenerbahçeအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သောSelçukŞahinသည်သူ၏မစ်ရှင်တွင်လျှို့ဝှက်သူရဲကောင်းတစ် ဦး အနေဖြင့်မှတ်မိနိုင်ခဲ့ပြီ
SelçukŞahinသည်ဒေသတွင်းနှင့်ပြည်တွင်းကစားသမားများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုခိုင်မြဲစေပြီးကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကိုအသင်းအတွင်းရှိဘောလုံးသမားများထံလွှဲပြောင်းပေးပြီးသူတို့၏လူမှုရေးဘဝအတွက်အကြံဥာဏ်များလည်းပေးသည်။ ၎င်း၏ ၁၂ နှစ်တာသမိုင်းကြောင့်နည်းပညာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ခိုင်မာစွာရပ်တည်ခဲ့သည်။
Fenerbahçeအတွက်အရည်အသွေးမြင့်နာမည်SelçukŞahinသည် ၂၀၀၃-၂၀၁၅ အကြားတွင်ဘောလုံးကစားခဲ့သည်။ သူက 338 ဂိမ်းထဲမှာကစားခဲ့ပါတယ်။ (၃) TFF Super Cup၊ တူရကီ (၂) ပွဲ၊ လိဂ် (၅) ပွဲ၊ (၂၀၀၈) နှင့် (၂၀၁၃) တွင်ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံ (၃) ခု၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
RESTBET501 GALATASARAY’DAN FLAŞ ERKEN SEÇİM KARARI! SULTANBET542 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN SULTANBET577 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN BETBOO868 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN BETBOO868 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN SUPERBAHİS630 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN SULTANBET561 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN BETPAS423 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ SUPERTOTOBET0121 GALATASARAY’DA BAŞKANLIK SEÇİMİ İPTAL EDİLDİ BETPAS423 FALCAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNÜYOR?
6 Comments on RESTBET501 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN
YURDUN December 7, 2020 at 6:40 am
MUAMMER December 11, 2020 at 10:20 pm
ONAT December 12, 2020 at 10:40 pm
NİZAMETTİN December 14, 2020 at 5:50 pm
ANIL December 15, 2020 at 3:30 am
DİLAN December 17, 2020 at 5:50 pm